I-RFC i-Arizona R1390 i-Printer Flatbed China Manufacturer
Incazelo:I-RFC i-Arizona Printer,Cet Printer Flatbed,Iphrinta ephansi eshibhile
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > I-RFC i-Arizona R1390 i-Printer Flatbed
Singumama we-EPSON, ngakho-ke i- RFC Arizona R1390 UV Flatbed Printer inekhwalithi efanayo noma engcono kune-EPSON. Iyakwazi ukuphrinta efonini yefoni, amathayili e-ceramic, ingilazi, ingubo, izinkuni, i-ect. Isithombe osinyathelisa singadlula iminyaka engaphezu kwengu-10 ephikisana ne-UV nemvula.
I-RFC i-Arizona Printer uhlobo oluthile lokusetshenziswa kwe-ink jet uhlobo lwe-digital, le- Cet Flatbed Printer application inkulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Iphrinti ephansi eshibhile Ihluko :
4.Printa ngesistimu yokuvikela ikhanda, lungisa ukuphakama ngokuzenzakalelayo. Ingavikela ikhanda lephrinta ukuthi lingaboni, kungekho sidingo sokulungisa ibanga lokushicilela ngesandla ngenkathi liphrinta
Izici eziwusizo zephrinta yethu ye- UV ephezulu kakhulu ye-UV 2016 RF-A3UV:
2. Iphrinta ehamba phambili ehamba phambili emhlabeni ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. I- A3 Flatbed Printer I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
I-RFC i-Arizona Printer Cet Printer Flatbed Iphrinta ephansi eshibhile I-Arizona UV Printer I-Arizona UV Printer A3 I-Cake Art Printer I-A3 Macaron Printer I-Ink Macaron Printer